ललितपुर महानगरमा धमाधम सडक निर्माण(with Video) -
Home›विविध›जीवनशैली/स्वास्थ्य›ललितपुर महानगरमा धमाधम सडक निर्माण(with Video)
ललितपुर ः ललितपुर महानगरपालिकाले सडक निर्माणको पहिलो फेज अन्तर्गत १९ वटा भित्री सडक निर्माण गरेको छ । यी सडकहरु महानगरको वडा नं ४ , ७ ,८ ,९ ११, १३, १४ , १५ , २० ,२३, २७ पर्छन् । यो फेजमा चार दशमलव शून्य ६ किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् । अन्य वडाहरुमा पनि सडक निर्माणको काम फेज २ र ३ अन्तर्गत भइरहेका छन् ।
अहिले तेस्रो फेजसम्मको काम सुरु भइसकेको छ । तेस्रो फेज अन्तर्गतको सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा ५०वटा भित्री सडक निर्माण हुने छन् । यो भनेको २० किलोमिटर सडक हो । आउँदो जेठ महिनासम्म यी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ ।
घर अगाडिको बाटो बनेकोमा वडावासी प्रेमलाल जोशी खुशी हुनुहुन्छ । बाटो पिच नहुँदा प्रेमलालले झैं त्यो टोलका धेरैले सास्ती भोग्नु भयो । हिउँदमा धुलाम्य । वर्षामा ग्याज ग्याज हिलो । मोटरसाइकल, मोटर गुड्दा उडेको धुलो घरभित्रै स्वात्त पस्थ्यो । उहाँलाई सडक बलियो बनेकोमा उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । फुलवारी खुमलटार युवा क्लब सडक बनेपछि झण्डै पाँच सय घरधुरीको दैनिकी सजिलो भएको छ।
पहिलो फेज अन्तर्गत महानगरको १५ वडामा दुईवटा सडक बनेका छन् ।
यो कुसुन्ती कोल्डस्टोर गणेश मन्दिर सडक हो । ललितपुर महानगरको वडा नं १३मा पर्ने यो सडक नबन्दा धरैले सास्ती भोगेका थिए । सास्ती भोग्ने मध्ये एक हुनुहुन्छ शोभा ढुंगाना चुडाल । पाटन क्याम्पसकी प्राध्यापक शोभालाई सडक नबन्दा घरबाट बाहिरै निस्कन नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो । वर्खामा हिलाम्य । हिउँदमा धुलो उडेर हिडी साध्य हुन्न थियो । तर, अहिले धेरै सजिलो भएको छ तर, सडक बनेपछि हिड्डुल गर्न मात्रै सजिलो भएको छैन,त्यस क्षेत्रको वातावरण नै बदलिएको छ । कालोपत्रेपछि बाटो फराकिलो समेत देखिएको छ । पार्किङको व्यवस्था नभएकाले जहातही मोटरसाइकल र मोटर राखिदिँदा पैदलयात्रीलाई भने समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
वडा नं १३स्थित पंचेश्वर मन्दिरका पुजारी हुनुहुन्छ चिरंजिवी ढुंगाना । झापास्थायी घर भएका उहाँ दश वर्षदेखि यही वडामा बस्दै आउनु भएको छ । सडक नबन्दा मन्दिर अगाडि दिनहुँ दुर्घटना हुन्थ्यो । धुलो र हिलोले सडकमा हिड्नै सकिन्थ्यो । कुसुन्ती पंचेश्वर मार्ग फराकिलोसहित कालोपत्रे भएपछि यहाँका बासिन्दालाई सजिलो भएको छ ।
महानगरपालिकाकाको पहिलो फेज अन्तर्गत वडा नं १३मा दुईवटा सडक बनेका छन् ।
वडा नं ९ का शुभराज शाक्यले निर्माण अघि र पछिको सडकलाई यसरी तुलना गर्नुभयो — कालोपत्रे गरेको वर्षदिन पनि नटिकेका अन्य सडक देखेका शाक्य यो सडकको गुणस्तरका बारेमा —
पहिलो फेज अन्तर्गत वडा नं ९मा अर्को सडक पनि बनेको छ । यो सडकबाट ग्वार्खोस्थित नेपाल रेडक्रसको भवन पुगिन्छ । सडक नबन्दा हिउँदमा धुलो र वर्खामा हिलो खेपेका यस वडाका बासिन्दा अहिले यसबाट मुक्त भएका छन् ।
महानगरपालिकाको अर्को वडा । वडा नं १४ । यो वडामा महानगरको सडक निर्माणको पहिलो फेज अन्तर्गत ५ सडक बनेका छन् ।
यो वडाका स्थायी बासिन्दा देवीप्रसाद ओझालाई यस वडाभित्र कालोपत्रे भएको सडक देख्दा विकसित शहर पुगे झैं लाग्छ । यो सडक बनेपछि यहाँका बासिन्दालाई धेरै सजिलो भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । ८३ वर्षका ओझा विकास निर्माण र सामाजिक काममा निकै चासो राख्नु हुन्छ । अन्यत्रको सडक निर्माणको तरिका र यहाँको तुलना गरेका देवीप्रसाद गुनासो गर्नुपर्ने ठाउँ देख्नु हुन्न
यो ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नं १४ स्थित थसिखेल सभ्यतानगर सडक हो । जमुना गुरुड कपडा व्यवायी हुनुहुन्छ । यो सडकसँगैको आफ्नै घरमा जमुनाले कपडा व्यवसाय गर्न थालेको १५ वर्ष भयो । सडक नबन्दा पैदलयात्रीले भोगेको अप्ठ्यारोको उहाँ प्रत्यक्षदर्शी हो । धुलो उडेर हिड्न सकिन्न थियो । धुलो पसलभित्र पसेपछि जमुनाले पटक पटि दिउँसै पसल बन्द गर्नु परेको थियो ।
सडकनिर्माण भर्खरै सकिएको थियो । एक दिन सडकको बीचमा एक समूह जम्मा भयो । बनेको सडक फुटाउन थाल्यो । जमुनाको मनमा अनेक जिज्ञासा आए । को होला ? भर्खर बनेको सडक किन भत्काएको होला ? यस्तै यस्तै । अरु ठाउँ र अरु बेला गरेको कालोपत्रे छिट्टै उप्किन्थ्यो तर अहिलेसम्म कहिंकतै केही नभएको देख्दा जमुनालाई यो सडक अरु सडक भन्दा बलियो लागेको छ।
महानगरको वडा नं १४ को आशिष लोह चोक सडक भैसीपाटी पुग्ने छोटो र सजिलो भित्री सडक हो । सातदोबाटोबाट भैसीपाटी पुग्न धेरैले यो सडक प्रयोग गर्छन् । कालोपत्रे नहुँदा धेरै प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगेका थिए । दिनहुँ दुर्घटना हुन्थ्यो । अहिले यी सबै समस्या समाधान भएको छ । आशिष टोलका उत्तम बोगटी । धेरै ठाउँमा गरेको कालोपत्रे देखेका उत्तम आँखै अगाडि भएकोे यो कालोपत्रे उत्कृष्ट भएको बताउनु हुन्छ ।
चापागाउँ दोबाटोबाट भित्रपसेपछि भाटभटेनी सुपर मार्केटको विपरित दिशामा भित्रपस्ने एउटा फराकिलो सडक छ ।
वडा नं १४ मा रहेको यो सडक नबन्दा धेरै दुर्घटना हुन्थ्यो ।
हिउँदमा धुलो उड्दा हिड्डुल सकसपूर्ण बनेको थियो । पानीपर्दा हिड्न सकिदैंन थियो । ग्याज ग्याज हिलो एकातिर । अर्कोतिर खाल्डाखुल्डीमा जमेको पानी मोटर, मोटरसाइकलले छ्याप्दा पैदलयात्रीको विजोग ।
सडक बनेपछि यस क्षेत्रको वातावरण बदलिएको छ । व्यवसाय गर्नेहरु र पैदल हिड्नेलाई धुलोको डर छैन् । २०५४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित पूर्व वडा अध्यक्ष देवराज राई।
गणेश लामा । यो वडाका अस्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । तर , उहाँ यहाँ बसेको १० वर्ष भन्दा धेरै भइसक्यो । अन्यत्र कालेपत्रे झारा तिर्ने गरी भएको देखेका गणेश यो सडकको विशेषता यसरी बताउनु हुन्छ ।
यो सडक थसिखेल यज्ञ मार्ग हो । महानगरको वडा नं १४ मा पर्ने यो सडक बनेपछि यहाँका ५ सय घरलाई सजिलो भएको छ । उनीहरुले हिलो र धुलोबाट मुिक्त पाएका छन् ।
अब लागौं , ललितपुर महानगरको वडा ८ तर्फ । भित्री सडक भएपनि प्रयोगका दृष्टिले यो व्यस्त सडक हो । महानगरको फोहोरमैला केन्द्र यो सडक हुँदै पुगिन्छ ।रुद्रप्रसाद श्रेष्ठको सडकसँगै फार्मेसी छ । बिहान सबेरदेखि राति अबेरसम्म पसलमा बस्ने रुद्रले यो सडकको दुरगति नजिकबाट अवलोकन गर्नुभएको छ । सडक बनेपछि हिलो,धुलो लगायतका समस्या समाधान भएको छ ।
औसीमा गरेको कालोपत्रे पूर्णिमामा भत्कियो भन्ने खबरले दिक्क भएका रुद्र यहाँको कालोपत्रे गुणस्तरीय भएको टिप्पणी गर्नु हुन्छ । सडकले ललितपुर महानगरपालिकालाई महालक्ष्मी नगरपालिकासँग जोड्छ ।
सातदोबाटोबाट जाँदा गुण सिनेमा हल नपुग्दै चक्रपथसँगै जोडिएको यो सडक हो, ग्वार्खो पाको महादेवस्थान सडक । यो सडक महानगरको वडा नं ७ मा पर्छ । आफ्नै घरमा व्यवसाय गरेका पुष्परत्न शाक्य सडकमा उडेको धुलो पसलभित्र ह्वात्तै पस्दा हैरान हुनु भएको थियो । बिग्रेको सडकका कारण धेरैले पाएको सास्तीको प्रत्यक्षदर्शी समेत हुनुभयो उहाँ । ललितपुर महानगरले सडक कालोपत्रे गरेपछि यो सडक प्रयोगकर्तालाई सजिलो भएको छ। अन्यत्रको भन्दा यहाँको सडक बलियो भएको दाबी छ पुष्पराजको ।
अब लागौं, ललितपुर महानगरको वडा नं ४मा रहेका सडक तर्फ । पहिलो फेज अन्तर्गत यो वडामा २ वटा सडक बनेका छन् । यो सडक भनिमण्डल क्लब नजिकैबाट चक्रपथको पटिपा चोक निस्कन्छ । यो सडक बनेपछि यस क्षेत्रका बान्सिदाको जीवनयापन सहज भएको छ । सडक निर्माणलाई नजिकबाट नियालेका मुकुन्द खरेल । सडक निर्माणलाई प्रत्यक्ष रुपमा उहाँले नियाल्नु भएको छ । अन्यत्र बनाएको सडक दुई चार महिनामै सडक भत्कियो भन्ने खबर सुनेका र पढेका मुकुन्द यो सडकका बारेमा भन्नुहुन्छ ।
अब पालो , महानगरको चक्रपथभित्रका वडा नं ११ र २०मा बनेका सडकको । यो सडक ललितपुर महानगरको वडा ११ मा पर्ने सडक हो । यो सडक बनेपछि झण्डै ५ सय घरधुरीको दैनिकी सजिलो भएको छ ।
सडकमा परेका खाल्डाखुल्डीमा परेर दिनहुँ धेरै मोटर,मोटरसाइकल दुर्घटना हुन्थ्यो । सडक बनेपछि यो क्रम घटेको छ । सडकको गुणस्तरको बारेमा वडा नं ११ का रवि दर्शनधारी । तर, रविको लाई सम्बन्धित निकायहरुले समन्वय नगरेकोमा गुनासो छ ।
वडा ं २० मा यो सडक बनेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले सास्ती खेप्नु परेको छैन् । भित्री सडक प्रयोग गर्न चाहने पैदलयात्री र सवारी चालकहरुले समेत यो सडक प्रयोग गर्छन् । यो सडक पुल्चोक गावहालबाट कुमारीपाटी निस्कने भित्री सडक हो । सडकको गुणस्तरको र यो सडक बनेपछि भएको सजिलोको बारेमा गावहालका सानुकाजी महर्जन ।
अब हामी लाग्दैछौं , महानगरको चक्रपथबाहिर पर्ने वडा तर्फ यी वडा ललितपुर उपमहानगरलाई महानगर बनाउने क्रममा गाभिएका साविक गाविसका वडाहरु हुन् । यो सडक वडा नं २३ को सडक हो । धापाखेल रातोघरसँग जोडिएर सुरु भएको यो सडक गैरी गाउँसम्म पुग्छ । यो सडक बनेपछि पाँच सय घरधुरीको हिलो, धुलो खेप्नु परेको छैन् । यस सडकका बारेमा वडाका निर्वाचित सदस्य राधेश्याम कठायत।
यो सडक सुनाकोठी २७ को सडक हो । सुनाकोठी ओखाटदेखि तिनकुने पोखरी यो सडक बनेपछि वडा नं २७ का बासिन्दालाई मात्रै होइन, सुनाकोठी धपाखेल र सुुनाकोठी धापाखेल गर्न समेत सजिलो भएको छ । अर्थात वडा नं २७ र २३ लाई जोड्ने सडक हो ।
वडा नं २७ यो सडक सुनाकोठीलाई धापाखेल जोड्ने सडक हो । गणेश मन्दिर चोक सम्म पिच भएको छ । सडकको बारेमा वडावासी शालिकराम थापामगर।सडक पिचले यहाँका बासिन्दालाई सजिलो मात्रै होइन, यो टोल सुन्दर समेत भएको छ ।
राजपा नेताहरुसँग भेट्न प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा इन्कार !
ललितपुर महानगरले पसल खोल्ने समय तोक्यो, नियम पालना गरेर मात्रै खोल्न पाइने
‘जग्गा बेचेर पर्व कहिलेसम्म ?
सरकारद्धारा चालिएको असंवैधानिक कदम बिरुद्ध २० नं. वडा इकाई समिति ल.पु.म.प क्षेत्र नं.३ नेपाली कांग्रेसको बिरोध प्रदर्शन कार्यक्रम
केन्याको डान्सबारबाट पक्राउ परेका १२ नेपाली युवतीलाई काठमाडौं ल्याइयो